လူမျိုးခြားကိုနှိမ်ချတဲ့ ဓာတ်ပုံဟောင်းတပုံကြောင့် ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် တောင်းပန်နေရ
19 ก.ย. 2562 - 19:40 น.
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ နီးပါးက ကျောင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတခုမှာ မျက်နှာကို မိတ်ကပ် အညိုရောင်ဆိုးပြီး ပျော်ပွဲဖွဲ့ခဲ့တဲ့အပေါ် ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ဂျပ်စတင် ထရူးဒိုးက တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းက ရခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ခုနှစ် West Point Grey Academy ကျောင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်က ပုံမှာ မစ္စတာထရူးဒိုး က မျက်နှာနဲ့ လက်တွေကို မဲညိုအောင် လိမ်းခြယ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့အဲဒီတုန်းက အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ကိုနောင်တရကြောင်းနဲ့ အဲဒီအချိန်က သူ့ရဲ့သိမြင်မှုက အဲဒီထက် ပိုပြီး ရှိနေသင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်ကျရင်လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ နောက်တကြိမ်အရွေးခံရဖို့ ရည်မှန်းထားတာပါ။
အရင် ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ပီရာ ထရူးဒိုးရဲ့ သားဖြစ်တဲ့သူဟာ ဗင်ကူးဗားက အဲဒီ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတခုမှာ တက်ရောက်ခဲ့သူပါ။
မစ္စတာ ဂျပ်စတင်ထရူးဒိုးဟာ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူနေစဉ် တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုပုံကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အရှက်ရစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြတဲ့ ဓာတ်ပုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာ မစ္စတာ ထရူးဒိုးက အာရေဗီယံ ညများ အထိမ်းအမှတ် ပျော်ပွဲအတွက် အာလာဒင်ဝတ်စုံကို ဝတ်လာခဲ့စဉ်က ပုံလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
"အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော်ပဲ တာဝန်ယူရမှာပါ။ ကျွန်တော်အဲဒီလို မလုပ်သင့်ခဲ့ဘူး" လို့ သူကပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော် ပိုပြီးသိမြင်သင့်တယ်၊ ဒီလိုအပြုအမူဟာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားနှိမ်ချတဲ့ အပြုအမူလို့ အဲဒီတုန်းက မထင်မိခဲ့ဘူး" လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
မျက်နှာညို၊ မျက်နှာမဲ၊ မျက်နှာဝါ တွေဆိုတာက ဘာလဲ
အသားအရောင်မတူတဲ့ သူတွေနဲ့တူအောင် မျက်နှာကို မိတ်ကပ်လိမ်းကြတာကို မျက်နှာညို၊ မျက်နှာမဲ လို့ ခေါ်ကြတာပါ။
အရင်ရာစုနှစ်တွေအတွင်းမှာ လူဖြူသရုပ်ဆောင်တွေက အာဖရိကန်-အမေရိကန်တွေကို လှောင်ပြောင်တဲ့သရုပ်ပြကွက်တွေမှာ အဲဒီလို လိမ်းကြပြီး ဒါတွေက လူမျိုးရေးခွဲခြားနှိမ်ချတာ၊ ထိပါးတိုက်ခိုက်တဲ့ အပြုအမူ တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ အပြုအမူတွေ ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာညို၊ မျက်နှာမဲ၊ မျက်နှာဝါတွေ လုပ်တယ်လို့ ပြစ်တင် ဝေဖန်ခံရတာတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်ဆလင် ကောင်စီက အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ မူစတာဖာ ဖာရွတ်ခ် က "ဝန်ကြီးချုပ်က မျက်နှာညို၊ မျက်နှာမဲ အသွင်လုပ်ထားတာကို တွေ့ရတာ အတော် စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်တယ်၊ ဒီလို မျက်နှာညို၊ မျက်နှာမဲ လုပ်တာဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြားရသလိုဖြစ်ပြီး အနောက် ကမ္ဘာကပဲ အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ အမြင်ကိုဖော်ပြတာမို့ လက်သင့်မခံနိုင်စရာပါ" လို့ မှတ်ချက်ချပါတယ်။
ကောင်စီက "လူတွေဟာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာတယ်၊ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်" ဆိုတာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ပြောပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းက အပြုအမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာ ထရူးဒိုးက အလျင်အမြန် တောင်းပန်တဲ့အပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်း သူတို့ တွစ်တာကတဆင့် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အတိုက်အခံ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင် အင်ဒရူး ရှီးယားက "ဒီပုံက ၂၀၀၁ တုန်းက လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ပုံ၊ အခုကြည့်လည်း လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ပုံပါပဲ" လို့ ပြောရင်း ဆုံးဖြတ်မှုမှန်ကန်တာ၊ ရိုးသားတာ စတာတွေ မရှိတဲ့သူဟာ ဒီနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ဖို့ မသင့်လျော်ဘူး" လို့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာထရူးဒိုးဟာ နိုင်ငံတွင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာမှု အပေါ် ထောက်ခံတဲ့ မူဝါဒကိုကိုင်စွဲထားပြီး နိုင်ငံတွင်းက လူနည်းစုလူမျိုးတွေရဲ့ မဲပေးထောက်ခံမှုကို တောင်းခံနေတာပါ။
လူထုစစ်တမ်းတွေအရ အောက်တိုဘာရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးသက်တမ်းအတွက် ဝင်ပြိုင်မယ့် မစ္စတာ ထရူးဒိုးနဲ့ တခြားယှဉ်ပြိုင်ဖက်တွေအကြား အကြိတ်အနယ် ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ မှန်းဆနေကြချိန်မှာ အတိတ်တုန်းက လူမျိုးရေးနှိမ်ချခွဲခြားထားတဲ့ အခု ဓာတ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။
อัลบั้มภาพ လူမျိုးခြားကိုနှိမ်ချတဲ့ ဓာတ်ပုံဟောင်းတပုံကြောင့် ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် တောင်းပန်နေရ